မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-01 > ငါသည်ဘုရားသခင်မှန်လျှင်
Wenn ich Gott wäre, dann würden nur die bösen Menschen früh sterben und die guten würden ein langes glückliches Leben führen. Aber die Bibel besagt, dass Gott manchmal auch die Gerechten umkommen lässt, weil sie dem Bösen entkommen sollen (Jesaja 57, 1). Wenn ich Gott wäre, dann würde ich jeden Menschen immer ganz genau wissen lassen, was ihn in der Zukunft erwartet. Es gäbe keine Frage darüber, was ich mir bei etwas gedacht habe. Es wäre alles sorgfältig geplant und leicht verständlich. Aber die Bibel besagt, dass uns Gott nur durch einen trüben Spiegel schauen lässt (1. Korinther 13, 12). Wenn ich Gott wäre, dann gäbe es auf dieser Welt kein Leid. Aber Gott sagt, dass diese Welt nicht ihm, sondern dem Teufel gehört, und deshalb schreitet er nicht immer ein und lässt Dinge geschehen, die wir nicht nachvollziehen können (2. ကောရိန္သု ၁၃:၁၄)။
ငါသည်ဘုရားသခင်မဟုတ် - ဤကမ္ဘာအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာပင်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုအခွင့်ထူးတစ်ခုရှိတယ်၊ သူကသိတယ်၊ ငါမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ရဲ့ဘဝအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာမိုက်မဲခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာသူသိတယ် အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုနားလည်ဖို့ဘယ်အချိန်မှာကောင်းတယ်၊ ဘယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူသိတယ်။ မည်သည့်ရုန်းကန်မှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များဖြစ်စေသည်ကိုသူသာလျှင်သိသည်။ သူသည်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသူသာသိသည်။